Iingcebiso ezi-15 eziphezulu ze-ACT
UMTHETHO wehlisa? I-Scared ingenangqondo malunga nezinto ezigcinwe kuwe xa uzihudula kwisiko lokuvavanya kule vavanyo yokukhetha ezininzi? Ewe, qhosha iqhosha. Ezi zilandelayo ze- ACT zimcebiso ziya kukufumana umgangatho we-ACT ongcono. Ngoko khumbula abafana ababi, ulungile?
Akukho ziqwenga zokukopela ezivunyelwe.
Iingcebiso eziphezulu ze-ACT ACT
Ewe, nokuba nzima. Awuyi kuhlawulwa ngenxa yokuqiqa njengokuba uza kuthatha uvavanyo oludala lwe-SAT.
Kulo rekhodi, uvavanyo lwe - Redesigned SAT , olwalugcinwe kuqala ngo-Matshi 2016, aluphendulanga iimpendulo ezingalunganga kwakhona.
Sebenzisa i-POE ngaphambi kokuba uqikelele
I-POE iyinkqubo yokupheliswa . Umbuzo ngamnye uza kuba neyodwa impendulo ephuma apho. Phuma ngokwempembelelo loo mpendulo ukuze ungalingeki ukuba uyisebenzise, ​​kwaye uya kuphakamisa iimpawu zakho zokuqagela ngokuchanekileyo. Emva koko buyela uze ubone ukuba unokuwela ngaphantsi omnye.
Phendula yonke imibuzo elula kuqala, uze uqhubekele kunzima. Imibuzo emide, enzima kakhulu ayifanelekanga nawaphi na amanqaku kunemibuzo elula. Ngoko fumana onke amanqaku ongakwazi ngokukhawuleza njengoko unako.
Ngexesha lokuvavanya, awuyi kufumana ixesha elide lokufunda izikhokelo, ngoko ukuba uthatha imizuzu emihlanu ukuba ufumanise ukuba wenzeni, le mizuzu embalwa uyakufuneka ufumane amanqaku.
Musa ukwenza i-Doodle
Kwiphepha lokuphendula, oko kukuthi. UMTHETHO uqulunqwa ngumshini; ukuba inkukhu yakho iphazamise indlela yokufunda, ungaphuthelwa kwiindawo.
Gcina iphepha le-ovals licocekile njengoko linokwenzeka.
Yenza iifayile ezimbini: enye ye-duty-heavy duty efuna ukuyenza kunye nesinye i-eraser ehlambulukileyo yokulungisa i-ovals yakho ngokupheleleyo. Awufuni ukuphawula amanqaku ukukhawula iimpendulo zakho kwaye kukubangela ukuba ulahlekelwe ngamaphuzu.
Kwinqanaba elithile lokuvavanya, uza kuba nemizuzwana engaphantsi kwama-30 ukuphendula umbuzo ngamnye, ngoko gcina loo nto ingqondweni.
Musa ukuyichitha imizuzu emithathu ekhangela kwi-space okanye ufunde kwakhona inqaku elide; uhlale ucacile.
I-Archaic, ewe, yintoni na ngefowuni yakho kunye nayo yonke, kodwa ekubeni awuyi kukwazi ukuba nefowuni yakho kunye nawe, ulethe umlindi. Akukho siqinisekiso sokuba uza kuvavanywa kwigumbi ngewashi yokusebenza.
Phinda ucinge ngokucacileyo
Ukuba impendulo ibonakala kulula, inokuba yinto nje. Qiniseka ukuba ufunde yonke impendulo yokukhetha kwaye ukhethe impendulo engcono kakhulu. Ukhetho olucacileyo lungaba yinto ephazamisayo.
Ukuba uthe wambeka uphawu B kumbuzo 18, mhlawumbi unesizathu esihle salo, ngoko ungabuyeli uze uyitshintshe, ngaphandle kokuba ufumene ulwazi kwinqanaba elilandelayo lomvavanyo ukuchasisa inkolelo yakho yokuqala. Izibalo zibonakalisa ukuba ukuqiqa kwakho kuqala kukudla okulungileyo.
Ukuba unamathele phakathi kwezigqibo ezimbini zokuphendula, yenza isangqa umbuzo uze ubuyele kuyo ngamehlo amatsha emva kokuba uphendule enye imibuzo. Khumbula, kufuneka uhambise.
Yonke imibuzo emihlanu okanye njalo, jonga ngokuphindaphindiweyo iphepha lakho lokuphendula ukuze uqiniseke ukuba awuzange unqamle i-oval. Akukho nto embi kunokuba ufike ekupheleni kokuvavanya kwaye uqaphele ukuba ulahlekile ukuzalisa i-oval endaweni ethile kwaye ufanele ususe yonke into.
Faka i-Calculator yakho
Iziko leemvavanyo aliyi kunika enye, ngoko ke misela i-calculator evumelekileyo yokusebenza ngokulula kwemathematika. (Yonke imibuzo ingaphendulwa ngaphandle kweyodwa, kodwa ngenise enye.)
Inkcazo Ngaphambi kokubhala
Ukuba uthatha isicatshulwa , qiniseka ukuthatha imizuzu emihlanu kwimizuzu engama-40 uze ucwangcise ngaphambi kokuba ubhale. Akusilo ukuchitha ixesha; abadlali bafuna iincwadana ezicwangcisiweyo kakuhle . Indlela efanelekileyo yokufumana enye kukucwangcisa kwangaphambili kunye nesicaciso okanye umququzeleli ocacileyo.
Uyivile ngaphambili, kodwa yinyaniso. Thenga incwadi ye-ACT prep, uphendule ngamnye umbuzo kuwo. Uya kuzuza ukuzithemba kunye neengongoma ezongezelelweyo ngokwenza njalo.
Ezi ngcebiso 15 zingasindisa ubomi xa uthatha umThetho , ngoko qi ni sekisa ukuba ulandele bonke.
Yintoni i-Mustister Special Mustang?